Ku cusbooneysii shaashadda kumbuyuutarka adoo leh dekedan
USB-C wuxuu adduunka ku xiran yahay duufaan. Haatan, qalabka sii kordhaya ayaa taageeraya tiknoolajiyada si ay uga faa'iidaystaan ​​sifooyinka badan.
Xaqiiqdii, USB-C waa mid ka mid ah fursadaha isku-xirnaanta oo badan oo ku yaalla goobta farsamada. Adigoo caawimaad ka helaya USB-C, waxaad ku wareejin kartaa xogta xawaare sarreeya oo waxaad ku xiran kartaa kormeerayaal dheeraad ah wax kasta oo ka kiniinka ah ilaa laptops. Maadaama USB-C loogu talagalay daboolida awoodda awoodda leh, waxaad ku shaqaaleyn kartaa tiknoolajiyada si aad u dhaqso badan u soo qaadatid aaladaha.
Iyadoo la eegayo fursad ah in laga faa'iidaysto daaqada USB-C, noocyo kala duwan oo kormeerayaal sameeya, oo ay ku jiraan LG, HP, iyo Asus waxay bixiyaan dekadaha USB-C. Sida qalab kale oo taageera USB-C, kormeerayaasha waxay bixiyaan dabacsanaan doorashooyinka dekadaha, taas oo kuu ogolaaneysa inaad lacag ka qaadato casrigaaga ama fiilo ku rakibo kormeer dheeraad ah isla hal dekedeed. Xaaladaha qaarkood, marka ay jiraan meelo badan oo USB-C ah oo ku yaal kormeeraha isku midka ah, waxaad samayn kartaa oo dhan oo intaas ka badan.
Ugu dambeyntii, kormeerayaasha USB-C waxay bixiyaan qaar ka mid ah dabacsanaanta ugu fiican waxayna ku siiyaan xakamaynta ugu badan. Laakiin helitaanka midka saxda ah ee aad adigu ku adkaan karto maadaama ay tahay inaad tixgeliso xajmiga miisaanka, miisaaniyada, naqshadeynta, tirada dekadaha iyo wax badan. Si aad u caawisid, waxaan baarnay kormeerayaasha ugu fiican ee USB-C qiimaha lacagtaada, sidaas darteed go'aanka ayaa noqon doona mid sahlan.
Haddii miisaaniyadu aysan ahayn arrin walaac leh oo aad si fudud uga fiirsatid kormeerka ugu fiican ee USB-C ee suuqa, LG 34UC99-W waa mid ka mid ah in la eego.
Kormeeruhu wuxuu ku yimaadaa shaashad qafiif ah oo qiyaasto 34 inch. Laakiin tan iyo markii loo jeexay, ka digtoonow in ay ka ballaaran tahay kormeerayaasha caadiga ah sidaa daraadeed wuxuu leeyahay saamiga ballaadhan ee 21: 9.
Shaashadu waxay leedahay 3840 x 1600 pixel resolution waxayna leedahay muuqaal Screen Split 2.0 oo kuu ogolaanaysa inaad si isdaba joog ah u bedesho sida daaqadaha loogu diyaariyo bandhigga. Iyada oo laga caawinayo dekedda USB-C, waxaad ku wareejin kartaa xogta iyo helitaanka 4K content oo ka imanaya dekedda. Iyo muuqaal la yiraahdo FreeSync, waxaad xaqiijin kartaa in ficilada dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa ah ee ciyaaraha fiidiyooga ay si habsami leh ugu socon doonaan adigoo isku dayaya cabirka kaararkaaga casriga ah iyo heerka cusbooneysiinta cusbooneysiinta.
Haddii aad haysato dukumiinti dheer waa inaad akhridaa laakiin aad ka walaacsan tahay indhahaaga, LG 34UC99-W wuxuu leeyahay Barnaamij Mode kaasoo yaraynaya iftiinka buluuga ah uguna yar yareeya daalka indhaha.
LG 34UC99-W wuxuu leeyahay wax yar oo qof walba ah. Haddii aad rabto waayo-aragnimo isku mid ah laakiin waxoogaa ka weyn, waxaa jira 38-inch doorasho. Laakiin si kastaba ha noqotee, diyaar u ah inaad qarash weyn ku qaadato si aad u hesho kormeerka guud ee USB-C ee suuqa (xaqiiqdii waa u qalantaa inkastoo).
In adduunka ah ee kormeerayaasha USB-C-diyaar, waxaa jira runtii ma jiraan wax sida kormeerka miisaaniyadda-saaxiibtinimo. Taa baddalkeeda, waxaa jira kuwa leh qiimo jaban qiimaha iyo kuwa ku yimaada sicirka dhabta ah ee macaamiisha caadiga ah. LG 34UM69G-B ayaa ku habboon qaybta dambe.
Kormeeraha LG wuxuu la socdaa shaashad 34-inch ah oo leh muraayad 21: 9. Muuqaalku wuxuu leeyahay 2560 x 1080 qaraar, kaas oo ku filan inta badan isticmaalka. Waxaa sidoo kale jira 1 Maajo Muuqaal Hawleedka Muuqaalka Muuqashada si aad u aragto muuqaalada degdega ah ayaa weli kufilan doona kormeeraha.
Kormeeruhu wuxuu ku yimaadaa kormeero kala duwan si uu kaaga caawiyo hagaajinta khibradaada aragtidaada. AMD FreeSync, tusaale ahaan, waxay hubin doontaa in heerka xaddiga kaararka sawirku uu u dhigmayo heerka cusbooneysiinta cusbooneysiinta. A Dynamic Action Sync macnaheedu waa kormeeruhu wuxuu ku haboon yahay ciyaaraha fiidiyowga, iyo xulashada Black Stabilizer waxay kaa ilaalin doontaa muuqaalkaaga mugdigaaga sida ay u eegayaan sida ay tahay.
Marka lagu daro dekedda USB-C, waxaad ka heli doontaa noocyo kala duwan oo doorasho ah, oo ay ku jiraan HDMI 1.4 iyo DisplayPort. Waxaad sidoo kale dareemi doontaa qaar ka mid ah sawirrada naqshadaynta, sida V-Line ee casaanka midabka cas cas si loogu daro rafcaan muuqaal ah ee shaashaddaada.
Haddii miisaaniyadu aanay ahayn walaac laakiin habka kormeereedu u eeg yahay gurigaaga, Hagaajinta HP waa habka lagu tagayo. Hoyga HP-ga wuxuu leeyahay shaashadda gawaarida ah ee tallaabooyinka, maxaa yeelay magaceedu wuxuu soo jeedin karaa, 34 inji. Muuqaalku wuxuu leeyahay 21: 9 saamiga muuqaalkuna wuu ku mahadsanyahay aragtida balaaran iyo qashinka khafiifka ah, 34 boqolkiiba shaashado dheeraad ah oo hantida maguurtada ah oo u dhiganta 16: 9 ikhtiyaari ah.
Shaashadu waxay leedahay 3440 x 1440 pixel resolution iyo 6ms jawaab celin si ay kaaga caawiso inaad ku raaxeysato content-ka-guurista. Haddii ay dhacdo in aad aragto content kula saaxiibo qol isku mid ah, 178-degree qiyaasta muuqaalka ballaaran ee muuqaalka ah waa inay ka dhigan tahay sawirkiisa xitaa haddii aadan eegin madaxa.
Kormeeruhu wuxuu dhigayaa marxaladda xarun-muuqaalka wuxuuna leeyahay dhar khafiif ah oo ku wareegsan shaashadda. Dhinaca hoose, waxaad ka heli doontaa aag halkaas oo qalabka Bang & Olufsen ku hadlaa ay ku nool yihiin, siinta dhawaaqa hodanka ah ee muusikada iyo erayada lagu hadlo. Haddii aad ka walwalsan tahay dadka ku dhejinaya, HP Envy 34 waxay la socotaa Websaytka Khaaska ah ee kaliya oo soo baxa marka la soo waco.
Dukumintiga USB-C waxaa lagu sawiray DisplayPort, HDMI iyo laba dekedood oo USB 3.0 ah.
Asus Designo MX27UC waa wax walba oo ku saabsan madadaalada iyo hubinta in aad heshay madadaallada muuqaalka iyo codka ee hal xirmo.
Kormeeruhu wuxuu ku yimaadaa 4K xal oo ah 3840 x 2160 pixels iyo xagal muuqaal leh oo ah 178 digrii, sidaas darteed adiga iyo saaxiibbadaa ayaa ku raaxaysan kara sheekada qolka. Tiknoolajiyada Asus Eye Care waxaa loo dhisay si loo tirtiro shaashadda shaashadda waxayna hoos u dhigtaa daalka indhaha oo leh muraayad yar oo buluug ah. Iyo maadaama muraayaduhu muujinayaan xajmigaas sare, waxaad isticmaali kartaa dekedda USB-gaaga si ay ula wadaagto qalabka 4K video.
Si loo dhamaystiro waayo-aragnimada muuqaalka ah, Asus waxa uu ku xidhay labo 3 wada hadal iyo ambalaansi ee Designo. Shirkadda ayaa sidoo kale soo saartay tiknoolajiyadda SonicMaster oo leh ICEpower si loo hubiyo in dadka Bang & Olufsen ku hadlaan ay wanaagsan yihiin iyagoo aan loo eegin meesha aad joogtid.
Asus sidoo kale wuxuu si dhakhso ah u qeexay naqshadeynta naqshadeynta, kaas oo la yimaada burooyin dhuuban oo dhan iyo meelo kala duwan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin DisplayPort, HDMI iyo USB 3.1.
Xaqiiji in la sameeyo, Dell wuxuu bixiyaa mid ka mid ah xulashada kormeerka ugu wanaagsan ee xafiiska isticmaalka Dell S2718D.
Kormeeraha, oo la socda muuqaal 27-inch oo LED ah oo leh qiyaas ah 2560 x 1440 pixels iyo 16: 9 qaabka qaabka, wuxuu leeyahay naqshad xudduud la'aan ah oo aan ka tagaynin boos meel kasta oo dekadaha ah. Sidaa daraadeed, Dell waxa ay ku xidhan tahay dhammaan dekedaha saldhigga kormeeraha, oo ku siinaya awood aad ku xirto qalabka ku xiran USB-C, HDMI iyo dekadaha kale.
Arrinta xiisaha leh, qaabeynta Dell waxay u egtahay macaamiisha la qabadsiin karo. Meelo badan oo ka mid ah kormeerayaasha kale ee miisaankoodu yahay 10 ama 20 rodol, Dell's S2718D waxay miisaankeedu yahay 6,5 rodol, taas oo fududaynaysa in meel laga guuro meel kale.
Si loo keeno sawirro tayo sare leh, Dell waxay ku xirnayd qaybo badan oo firfircoon, ama HDR, taageerid kormeerkeeda. Shirkadda ayaa sidoo kale si dhakhso ah u qeexday in kormeeruhu uu leeyahay saamiga ugu sareeya si uu u xoojiyo racfaankiisa muuqaalka ah.
Dell S2718D waxay la socotaa fiilo USB-C ah si loo kormeero. Qalabka USB-CG-ka ayaa loo isticmaali karaa shaqaale labalaabi, taas oo kuu ogolaaneysa inaad ku duuduubto buugga liis-gareynta laydhka oo kaliya oo aan kuugu soo dallacin mashiinkaaga laakiin sidoo kale keena sawirro laba-muuqaal ah.
Acer's H277HU waxaa loogu talagalay kuwa doonaya in ay dhigaan laba ilaaliye midba midka kale si aad u hesho waayo-aragnimo balaadhan oo muuqaal badan leh.
H277HU waxay qiyaastaa 27 inji waxayna leedahay qiyaasta 2560 x 1440 pixels. Shaashadda 100-malyan ee mid-mid-midka ah ayaa muujinaysa tayada muuqaalkaaga inay tahay mid aad u wanaagsan. Kormeeruhu wuxuu ku yimaadaa waqtiga jawaab celinta 4ms si aad u xakameyso nadiifinta dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa oo wuxuu ku siinayaa xulashadaada HDMI ama DisplayPort oo ay weheliso dekedda USB-C.
Isagoo ka hadlaya dekedda USB-C, Acer waxa uu sheegay in loo adeegsan karo hawlo kala duwan, oo ay ka mid yihiin awoodda aaladaha mobile-ka sida laptops ama casriga ah, oo xogta ka wareejinaya darawal adag oo dibadda ah ama bixinta fiidiyo-sare.
Si kastaba ha ahaatee, mawduuciisa ugu muhiimsan, waa, qaabka uu yahay. Kormeeruhu wuxuu ka yimaadaa waxa Acer ugu yeerayo naqshad ZeroFrame, sidaa daraadeed waxaad dhigan kartaa 277HU kale oo waayo-aragnimada muuqaalkuna waxay dareemaysaa inay tahay wax aan caadi ahayn. Waxay ku guuleeystaa in adoo bixiya dharka aadka u khafiifsan ee labada dhinacba, xitaa marka la barbardhigo 277HU kale, ma aha mid qaro weyn ku filan inaad ka saarto wax kasta oo aad eegayso shaashadda.
Acer's 277HU waxaa kale oo uu leeyahay shaqeeyn jajab ah oo kuu sahli kara inaad xaddidayso xagleynta aragtida laga bilaabo -5 digriga ilaa 15 digrii, taas oo macnaheedu yahay waayo-aragnimo aad u raaxo leh.
Mararka qaar, haysashada kormeere kaas oo ku xiran derbiga ma aha macno. Iyo xaaladahaas oo ah halka AOC i1601fwux ay caddayn karto inay tahay xulashada ugu fiican ee aad ka fiirsaneyso.
Meelo badan oo ka mid ah kormeerayaasha kale, doorka AOC waa mid la qaadi karo oo la imaan karo lakabyo noocyo ah, sidaas darteed waxaad ku dallaci kartaa haddii aad ku jirto xafiiska, guriga ama diyaarad. Shaashadda ayaa qiyaastay 16 inji waxayna la timaadaa xal buuxda oo ah 1920 x 1080 pixels. Kala duwanaanshaha iskudhafku maaha mid ugu wanaagsan 700: 1, laakiin luminta lumitaanka muuqaalka, waxaad heleysaa fursad aad ku qaadato shaashadda meel kasta oo aad tagto.
Dhamaantoodba, AOC uma baahna fiilo koronto. Bedelkeeda, waxaad si fudud u xireysaa aalada USB-ka ah ee calaamad kasta oo aad rabto, shaashaduna waxay kor u qaadeysaa oo muujisaa aragtidaada. Iyo xitaa waxaad moodi kartaa shaashadda si aad u aragto waxyaabaha ku jira qaabka muuqaalka ama sawirka.
Tan iyo markii AOC kormeerka loogu talagalay u-qaadista, waxaa laga yaabaa inaan la yaabin in at.333 inji, waa wax aad u dhuuban. Maadaama miisaankeedu yahay 1.8 rodol oo kaliya, waxaad ku ridi kartaa boorso oo aad u sii socotaa iyada oo aan wax culus saarin dhabarkaaga.
8 Laptops Acer Laptops oo iibsanaya 2018
8 Shirkadood ee Best Chromebooks si ay u iibsadaan 2018
Waa Maxay Faylka ADP?
The 7 Bluetooth Best Fiican si ay u iibsadaan ee 2018
Nyko Charge Station ee Wii - Dib u Eegista Shirkadda Wii - Wii
Horudhacayaasha Grafik Kumbuyuutarka 3D
Sida loo Muujiyo Fariimaha Largeer Font ee Mac OS X Mail
Sidee loo Bixiyaa Muuqaal Sawir ah si Loo Joojiyo Website-ka
Sidee Loo eegaa Wargelinta Guud ee Muuqaalka ee Muuqaalka
Nalalka Gawaarida ama Lamps: Yaa u Baahan?
Fariin qoraal ah oo bilaash ah: Dib u eegida adeegga SMS txtDrop.com
Waa maxay nooca Flash ee aan haysto?
Tilmaamaha Badbaadada Gawaarida Madadaalada Guriga
Khatarta Khatarta Loogu Talagalay Khatarta - PS3
Sida Loo Hubiyo iCloud Mail Status ee Arrimaha
Sidee Liiska iyo Nidaamka Dilka loo Isticmaalayo Amarrada PGrep & PKill
Sida Loo Doorto PSP Taasi Waa U Fiican
Sida loo Isticmaalayo Android Auto in kasta oo Car
Nidaamka aasaasiga ah
Siyaabaha ugu Fiican ee Looga Helo La Xaday ama La Lumiyay iPhone
Waa maxay email IMAP kuu sameyn karaan
Ku darista Sawirrada Shabakadda Google